मनसुनमा सरुवा रोगबाट बच्न... - Naya Patrika
मनसुनमा सरुवा रोगबाट बच्न…
डा. लोचन कार्की जनरल फिजिसियन | साउन ०२, २०७४
वर्षात्को मौसममा बाढी, पहिरो आउने तथा भल बग्ने कारण पानी तथा खाद्यान्न पनि प्रदूषित हुन सक्छ । जसले गर्दा वर्षात्को मौसममा धेरै सरुवा रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढ्छ । पानी पर्ने मौसममा पानीमा संक्रमण चाँडो हुने हुँदा हाम्रो शरीरमा विभिन्न सरुवा रोग लाग्न सक्छ । त्यसैले यो मौसममा आफ्नो स्वास्थ्य तथा खानपिनमा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ । पानी पर्ने मौसममा आफ्नो र परिवार सबैको स्वास्थ्यलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्नमा डा. लोचन कार्की यसो भन्छन् :